ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP အာရှ-ပစိဖိဒေသ ဌာနခွဲမှ ပေးအပ်သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု N-Peace Award ရရှိသူများကို ကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူများဆုကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးအခွင့်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီး မဝေေ၀နုက ရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ခေါင်းစဉ် ၄ ခုအတွက် ဆုချီးမြင့်ရာ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ၅ ဦး ပါဝင်ခဲ့သည်။
This entry was posted on October 24, 2014 at 11:57 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.